နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့်ဇနီး ဒေါ်ချိုချို (၁၆)ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂဗုဒ္ဓနေ့ အခမ်းအနားတက်ရောက်ရန် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင်းမြို့သို့ ရောက်ရှိ | Myanmar President Office
Submitted by admin on Sat, 05/11/2019 - 15:23
ဟနွိုင်း မေ ၁ဝ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့် ဇနီး ဒေါ်ချိုချို ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ နိုင်ငံသို့ တရားဝင် အလုပ်သဘောခရီး သွားရောက်ရန်နှင့် (၁၆)ကြိမ်မြောက် ကုလ သမဂ္ဂဗုဒ္ဓနေ့ အခမ်းအနား တက်ရောက်ရန် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်မှ အထူးလေယာဉ်ဖြင့် ထွက်ခွာကြသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ဇနီး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဒေသ စံတော်ချိန် မွန်းလွဲ ၃ နာရီ ၁ဝ မိနစ်တွင် ဟနွိုင်းမြို့သို့ ရောက်ရှိကြသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ဇနီးနှင့် အဖွဲ့အား ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ဝန်ကြီး H.E. Mr. Chu Ngoc Anh ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်သံအမတ်ကြီး Mrs. Luan Thuy Duong ၊ ဗီယက်နမ် ဗုဒ္ဓသံဃအဖွဲ့ အမြဲတမ်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Most. Ven. Thich Thanh Nhieu ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်စိုးဝင်း၊ စစ်သံမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်ဇေယျနှင့် တာဝန်ရှိသူများက Noi Bai ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ဇနီးနှင့် အဖွဲ့သည် ခေတ္တတည်းခိုမည့် Sheraton Hotel သို့ ရောက်ရှိကြသည်။
ညနေပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ဇနီးတို့သည် ဟနွိုင်းမြို့ရှိ မြန်မာသံ အမတ်ကြီး နေအိမ်သို့ ရောက်ရှိပြီး ဟနွိုင်းမြို့ မြန်မာသံရုံးနှင့် စစ်သံရုံးတို့မှ သံရုံးဝန် ထမ်းများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် နိုင်ငံတော်သမ္မတက သံရုံးဝန်ထမ်းများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများကို မေးမြန်းကာ လိုအပ်သည်များကို လမ်းညွှန်မှာ ကြားသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် သံရုံးနှင့် စစ်သံရုံး ဝန်ထမ်းမိသားစုများ အတွက် လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ပေးအပ်သည်။
ညပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ဇနီး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သည် မြန်မာသံအမတ်ကြီးနှင့်ဇနီးတို့က တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် ညစာစားပွဲသို့ တက် ရောက်ကြသည်။